Archives des oniversite - Midi Madagasikara
Oniversite : Manana fitakiana koa ny any Toamasina
Redaction Midi Madagasikara 16 janvier 2014 fitakiana, oniversite, Toamasina
Raha mbola tsy milamina ny toe-draharaha any amin’ny oniversite any Mahajanga dia fantatra izao, fa manana ny fitakiana koa ny avy ao Barikadimy ao Toamasina. Taratasy misokatra lava no nalefan’izy ireo any amin’ny tompon’andraikitra. Raha atao bangotokona izany dia mahasahana ny fiainan’ny oniversite iray manontolo. Nandefasan’izy ireo an’io taratsy io ny tompon’andraikitra any an-toerana. Singanina…
Toamasina : Mpianatry ny oniversite natelin’ny rano
Redaction Midi Madagasikara 6 janvier 2014 natelin'ny, oniversite, pianatra, rano, Toamasina
Niisa telo izy ireo, mpinamana avokoa ary samy mpianatry ny oniversite, niara-nilalao teo an-dranomasina ny zoma lasa teo. Nidiran-doza tampoka anefa satria nahery ny rano ary nentiny izy ireo. Samy nateliny tany izy telo saingy mba avotra soa aman-tsara ny roa rehefa navoakany, fotoana fohy taty aoriana. Ilay fahatelo kosa tsy mbola fantatra na maty…